DAAWO: Feysal Cali Waraabe oo hanjabay “Muuse wuxuu rabaa inuu Somaliland ku celiyo 1994” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Feysal Cali Waraabe oo hanjabay “Muuse wuxuu rabaa inuu Somaliland ku celiyo 1994”
January 3, 2022 Xuseen 6
Guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe, ayaa ka digay dagaal sokeeye oo ka qarxa Somaliland, hadii la qaban waayo doorashada Madaxweynaha.
Faysal Cali Waraabe oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, uu doonayo in Somaliland uu ku celiyo 1994, oo colaado sokeeye ay ka dhaceen deegaanadaas, uuna u qeyb-qeybiyo qabiilo dadka reer Somaliland.
Waxaa uu ugu baaqay shacabka inay ilaashadaan dowladnimada Somaliland, hadii taas dhici weydan ay iyaga oo ka liita siddii ay ahaayeen 1960kii u kala carari doonaan Xamar.
Somaliland ayaa waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa wax ka bedel ay doonayso Madaxtooyaddu in lagu sameeyo sharciga axsaabta siyaasadda, lana furo xisbiyadda, taas oo ay diidan yihiin xisbiyadda mucaaradka ah ee WADDANI iyo UCID.
Kani iyo Biixiga uu hadalhayo waxay kamid yihiin sufahadii uu Rasuulku (SCW) ummadda Islaamka uga digay in aysan talada udhiiban. Keligoodna ma aha e waxa Soomaalida hadda horboodaya 99% ayaa tilmaanta kusifeysan.
Bulshaweynta geiyada woqooyiga dalka kunool waxaa la gudboon in ay caqliga saliimka kaashato oo cakirnaantan dabadheeraatay iyo xaaladdan adagba mar uun si kamadambeys ah iskaga xoreyso. Waxaa xaqiiqado aan la inkiri karin ah in:
(i) Aysan Soomaaliya qarannimadeedii sahal iyo si dhakhsa lehba ku soonoqon doonin mustaqbalka dhow.
(ii) Aysan Isaaqu qaran noqon karin oo Somalilandta 1991 lagu riyoodayna dhaboobi karin.
Sidaas ajligeed, marka xaaladda iyo marxaladda uu dalku ku suganyahay qummaati loo qiimeeyo, bulshaweynta Woqooyi Bari iyo Woqooyi Galbeed oodwadaagta ku ah kafursanmayso in ay iyadu HEER WOQOOYI ufikirto oo qorshe dawladeed oo heerkaas ushaqeynayana hindisahiisa latimaaddo.
Mar haddii aysan bulshaweynta labadan geyi sina ukala go’i karin oo una kalamaarmi karin sida caadiga ahba, ayse oodwadaag iyo danwadaagba tahay, waxaa uu caqliga saliimku bidhaaminayaa in aysan kamaarmin in ay waxuun dawladwadaagnimo ahi kadhexeyso.
Isbahaysiga nidaamka dawladeedna waxaaba baahidiisa siixoojinaysa khatarta labdan geyi iyo dalkaba kagasoo aaddan dhagraha ay Abiy iyo Farmaajo maleegayaan, taas oo ay labadan geyi haddeerba si dadban iskaga duugsadaan oo isku mowqifna ka taaganyihiin.
Puntland iyo Somaliland haddaba siyaabo badan ayay iskugu xiranyihiin oo wada lagama-maarmaan ah; maxaa u diiday in ay nidaam dawli ah oo heer woqooyi ushaqeynaya wada dhistaan? Aan ka ahayn caadifada qabyaaladeed ee wada curyaaminaysa?
Reer SNMistan waa dad qabyaalad lafaha ka gashay, waxaana ugu daran tan dhexdooda ah. Waxaana arrinka sii murgiyey markii talada iyo xisbiyada loo dhiibay askari lagu doortay sharka ka buuxa iyo nin waalan — Faysal Waraabe.
Anigu intaan xusuusto, SNMistan waxay dhan walba ugu xasilloonayd intii Siilaanyo hoggaaminayey sababtoo ah wuxuu ahaa nin waayo-aragnimo iyo aqoon isku darsaday. Ma xusuusto hadallo aan loo meeldayin oo si sahal ah uga dhacay Siilaanyo.
Ugu dambeyn, reer SNMistan waxaa la gudboon inay inta goori goor tahay oo aysan mar kale birta iska aslin — kasoo degaan figta buurta dhalanteedka ah ee ay saaran yihiin soddonka sano, isla markaana wax la qaybsadaan Soomaali — haddii la helo hoggaamiye leh caqli iyo hiraal, Farmaajo kadib. Haddiise hoggaamiye caynkaas ah la waayo, inta maanta Somalia loogu yeero ayaaba kalatagi doonta.
Aaway guul wadayaashii “jeegaamaysnaa” (Cali Ducale & kii beenawaaska ahaa)?!
Waa taa dee, ma annagaa Soodaanta keenay. Waar “Iidoor” waligood dawlad noqon maayaan. Waa sidaa uu Feysal sheegay, iyagoo xaafad xaafad u kala socda oo iswada hingaadinaya bay aakhirka Xamar iska xaadirindoonaan, sida haddaba qiiqeedu baxayo.
Idin ma guhaanayo oo anaa dadka idiin kugu jecel, laakiin sida aad Ku socotaan ee aad qaarkiin isugu jaamaynaysaan baa sidaas ah, laakiin hadda Xamar la aadaabaa majirto sida muuqata. Waxa dadka isku dirayaana waa “dawlad xumo, nidaam xumo & hoggaamin xumo qabyaaladna dabada Ku wadata”.
Gunaanadkii, waar jamhuuriyaddii (Lawyacaddo illaa Libooye) “garanley” baa qabsataye halla soo duceeyo. Dhashii “Xaaji Daaroodna” hallaga ducaysto, denbibaa laga galaye.
@@@@ A,Arar iyo Awlal.
Horta marka hore SNM way dagaalantat hadafkii ay hubka u qaatayna way gaadhay oo waxay Dhashay somaliland oo marlabaad dib u curatay oo takada ku wareejisay,
Somaliland waa dal jira horena u jiray Wax aynu ku murmayno maanta maaha,
Isxifaaltanka xisbiyada somaliland waa wax iska caadiya ilaa maalintii la bilaabayna xisbiyadu way dhex martaa xifaaltanku weliba xiliyada doorasho soo dhaw dahay waaba caadada dimoqraadiyada iyo kala jiidashada Dadka, aduunyadana waa wax ka caadiya, waxaan xasuustaa Boris Johnson oo markii doorashada socotay khalkhal iyo tashiush la geliyey isagoo dacaayad lagu furay ujeedadu waxay ahay in sumcada laga dilo xisbigiisana aan loo codayn, waana kii guuleystay weliba dirqi iyo qasabna ku meel mariyey barnaamijkiisii Brexit oo dadka reer UK aad uga soo horjeedeen, markaa waa sunaha dimoqraadiyada intay socoto in lays xagxagto markay dhamaatana ninwalba danahiisa ku foofo,
Markaa waxba haku wareerina hawlaha somaliland tiina ayaa beylah ah Maamulka garoowe ee dhinac walba ka gubanaya ee isku rogmaday u taliya oo ka naxa waa hadaad cid ka naxaysaan oo damiir leedihiin,,
Maamulka garoowe wixii aad huurineyseen waataa ku qaraxday ceebtii ka dhacday boosaaso iyo weliba doorasho ku sheegii labada tuulo iyo ceebtii ka dhacday oo xitaa la diiday in lasoo shaaciyo kii ku magacawnaa Gudoomiyena uu shalay ka cararay ceebta iyo markuu ka yaabay waxa meesha ka socda inay kaaf iyo kala dheeri tahay,
Markii horeba somaliland isku dhereriya oo ku dayda ayaad is lahaydeen laakiin waad ku fashilanteen Copycat somaliland iyo inaad isku dheririsaan,
Marka aad reerahan jilib jilbka u kala fadhiya hubkoodana sida shuftada marba qolo lasoo baxayso adeer doorasho idinka dheer hagbadiina isku wareejiya marba qolada leh hagbada,,
Anigu faalladaydu waxay ku aaddannayd oo iguna raacsan Isaaqa waxgaradka ah ee caqliga saliimka iyo cilmigaba usaaxiibka ah, fahamsanna xaqiiqooyinka dhabta ah ee aan dooddayda kusaleeyay. Noocaaguse ma aha mid af Isaaqu leeyahay kuhadli kara oo waxna laga weyddiinayo, waayo waxaad kamid tahay kuwa maanka ka curyaaman oo caadifadaha maran iska laburqada ee aan cilmi iyo aqoon toona wax kuqiimeynin.
Waxaa maankaaga dhoohan laga dheehan karaa hawraartaas aad iskaga hadaaqday adiga oo aan iskudayin in aad caddeymo buuxa oo sugan oo lala tixraaci karo usooxiganin, sida hadalka ah:
“Somaliland waa dal jira horena u jiray Wax aynu ku murmayno maanta maaha”.
Xilligii gumeysiga waxa mandiqadda Soomaaliyeed ka jiray HAL ‘Somaliland’ ah ma ahayn e SHAN bay ahaayeen; midkoodna ‘dal’ ma ahayn e waxay ahaayeen geyiyo ixtilaal kujira oo dusha laga haysto. Haddaba, marka aad hadalkaas aan soonaqliyay ku andacoonaysay, shantaas ‘Somaliland’ kee baad ulajeedday, illayn maad caddeyn e?
Haddii aad ka wadday kii ‘British Somaliland Protectorate’ lagu suntaday, haddee kaasu Isaaq ma lahayn e wuxuu ahayd Saldanad Daarood oo Hartigu xukumayay. Dadka Warsangeliga oo keliya kunisbeeya way qaldan yihiin waayo Harti oo dhan ayaa kudhannaa oo xuduudo uma dhexeyn iyada iyo Boqortooyinkii ay garbaha iskuhayeen. Marka, adigu ‘Somaliland’-ka ‘British’-ka ahaa ma sheegan kartid oo raaciyad baad ka ahayd.
Tan kusaabsan ceebaha Puntland ka dhacayna, af aad kudhaleeceyso kugu maba yaallo marka horeba kol haddii aad Isaaq iyo SNM tahay, waayo wixii 1991kii ilaa 2007dii aaggaas ka dhacay ee ay Isaaqu marna beelaha kale u geysteen oo marna iyaga dhexdooda isu geysteen ayaa waxa Puntland ka dhacay toos u humaagaya oo hareynaya.
Kabase sooqaad in ay Soomaalidu ceebtaas ka wada simantahay. Dad ceebahaaga kula og hortooda la iskaga ma hadaaqo maandhe. Taariikhdana laga ma beensheego oo khayaal aan jirinna la isku ma qanciyo waayo khayaalku marna ma rumoobo sikasta oo aad ugu eedaanto.
RUNSHEEGE SOMALILAND,PUNTLAND JUBBALAND,IYO MAAMUL GOBOLEEDYADA KALEBA
WAA MAAMUL GOBOLEEDYO HOOS YIMAADA DOWLADDA DHEXE EE SOOMAALIYA OO UU MADAXWEYNAHA KA YAHAY FARMAAJO.
MAAMUL GOBOLEED KASTA WAXAA U DHISAN DOWLAD GOBOLEED LEH MADAXWEYNE, IYO WASIIRO TUSAALE MUUSE BIIXI,SACIID DENI.
IIDOOR THATS THE REALITY TAA OGAADA.